အထက်ဆည်တော်ကြီး (Upper Sedawgyi) | Moep1's Blog
(နေပြည်တော် ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ဧပြီ ၁၆ ရက်က ရတနာသိင်္ဃတံတား တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၊ ရွှေလီ(၃) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် အထက်ဆည်တော်ကြီး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
Comments Off on ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ရွှေလီ (၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် အထက် ဆည်တော်ကြီး ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| အထက်ဆည်တော်ကြီး (Upper Sedawgyi), ရွှေလီ(၃) Shweli-3	| Permalink
EP-1, Htoo Trading sign MoU to cooperate in hydropower projects
(NAY PYI TAW, 31 Dec, 2009)
The MoU signing ceremony between Hydropower Administration Department under the Ministry of Electric Power No. (1) and Htoo Trading Co Ltd to cooperate in Upper Hsetawgyi and Htakha hydropower projects through B.O.T system was held at the meeting hall of the Ministry of Electric Power No. (1) here on 29 December.
It was attended by Minister for Electric Power No. (1) Col Zaw Min, Minister for Electric Power No. (2) Maj-Gen Khin Maung Myint, Minister for National Planning and Economic Development U Soe Tha, Minister for Finance and Revenue Maj-Gen Hla Tun, deputy ministers, directors – general , managing directors and officials.
Minister for Electric Power No. (1) Col Zaw Min extended greetings and Chairman of Htoo Trading Co Ltd U Teza explained the purpose of signing the MoU. Later, the directorgeneral of the Hydropower Administration Department under the Ministry of Electric Power No. (1) and responsible person of Htoo Trading Co Ltd signed the MoU and exchanged the documents.
Comments Off on EP-1, Htoo Trading sign MoU to cooperate in hydropower projects	| ထာခ (Htakha), အထက်ဆည်တော်ကြီး (Upper Sedawgyi)	| Permalink
You are currently browsing the archives for the အထက်ဆည်တော်ကြီး (Upper Sedawgyi) category.